‘जनताका लागि रातको १२ बजेपनि हाजिर छु’:कांग्रेस युवा नेता विष्णु पोखरेल-Nagarikaawaj.com
‘जनताका लागि रातको १२ बजेपनि हाजिर छु’:कांग्रेस युवा नेता विष्णु पोखरेल
नागरिक आवाज/ बुटवल ,मंसिर १७-
नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ क का प्रदेश सभाका उम्मेदवार विष्णु पोखरेलसंग नागरिक आवाजले गरेको कुराकानी :
१) मतदातालाई तपाईले दिने प्रतिवद्धता अर्थात विश्वास के हो ?
क्षेत्र नं. ५ का जनतालाई आवश्यक परेको खण्डमा रातीको १२ बजे पनि नभनी जनताकै सेवामा समर्पित रहने प्रतिवद्धता मेरो छ । जनताको काममा जहाँ जान परेपनि जतिबेला पनि म तयार हुने छु ।
अहिलेसम्मको चुनावको गतिविधि हेर्दा आफू निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ । त्यसकारण म यही रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ (१) का जनताकै नजिकमा रहेर काम गर्ने छु ।
विगतमा देखिएको छ कि कोही नेता जितेर गएपछि एकपटक पनि जनतालाई मुख देखाउँदैनन तर म त्यस्तो होइन, मलाई विजयी गराउनु होस र भन्नुहोस तपाईहरुको लागि कहाँ जानुपर्छ म सदैव तयार हुनेछु । मेरो मतदातासंग मेरो प्रतिवद्धता यही नै हो ।
२) विकासका एजेण्डा तपाईसंग के छन ?
निश्चित रुपमा रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ मा नेता भरतकुमार शाहले धेरै विकास गर्नुभएको छ । यस क्षेत्रमा भएको विकास देखेरै मलाई विश्वास छ यो क्षेत्रवाट हामी तिनैजना कांगे्रसका उम्मेदवार विजय नजिक पुगिसकेका छौं ।
अर्कोतर्फ क्षेत्र नं. ५ क मा सवै जातजातिको बसोवास भएको क्षेत्र भएकोले म निर्वाचित भएर गएपछि समानुपातिक रुपमा नै विकास गर्ने प्रण गरेको छु ।
जातपात र धर्मका नाममा कसैसंग विभेद गर्ने छैन भन्ने मेरो दृढता हो । हामी तिनैजना मिलेर यस क्षेत्रको विकास गर्ने हो । त्यसमा म यहीका जनताको आदेशानुसार विकासमा सकृय हुन्छ ।
३) चुनाव जित्छु भन्ने आधार के छ ?
मैले चुनाव जित्छु भन्ने आधार भनेको नेपाली कांग्रेसले लिएको नीति सिद्धान्त नै हो । नेपाली कांग्रेसले गरेको विकास निर्माण नै हो । नेपाली कांग्रेसको आर्थिक उदारीकरणका कारण आज देशमा संचार, उद्योग, कारखाना, बैंक वित्तिय संस्था र सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका छन ।
कांग्रेसकै नीतिका कारण विदेश सम्वन्ध राम्रो छ र विदेशवाट सहयोग समेत प्राप्त भैरहेको छ । अर्कोतर्फ मैले यस क्षेत्रका जनतालाई विश्वास दिलाएको छु कि म जितेर गएमा अरु जस्तो गर्दिन भनेको छु । जनताकै समिपमा रहेर काम गर्छु भनेको छु । यस क्षेत्रमा अरुले नगरेको विकास मैले गर्छु भनेको छु र जनताले पनि मलाई विश्वास गरेर जिताउने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन ।
४) तपाई युवा हुनुहुन्छ । यहाँका जनताले अनुभवी र परिपक्व उम्मेदवार खोजेको भन्छन ?
होइन यो सरासर गलत कुरा हो । विपक्षीहरुले लगाउने आरोप मात्र हो । के युवाले देशको विकास गर्न सक्दैन र ? गगन थापा के यूवा होइन र ? हेर्नुस मन्त्री भएर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति काम गर्नुभयो ।
आज कुनैपनि गरिव नेपालीले पैसा नभएकै कारण अकालमा मर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसकै प्रतिप पौडेल र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता यूवा उम्मेदवारहरु पनि अहिले चुनावमा उठनु भएको छ । युवाहरुले नै हो वास्तवमा देश चलाउने । अव पुरानो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । म पनि एक युवा उम्मेदवार भएकोले कसैलाई मन नपरेको होला तर त्यो उनीहरुको गलत प्रचारबाजी मात्र हो ।
५) तपाईको क्षेत्र पहाड र मधेश दुवै क्षेत्रमा पर्दछ । कसरी संयोजन गर्नुभएको छ ?
हेर्नुस मधेशको समस्या पहिल्यैदेखि पहिचान गरेको छु । मधेशको समस्या समाधानमा नेपाली कांग्रेसले जति त्याग र मधेशको विकास कांग्रेसले जति अरु कुनैपनि पार्टीले गरेको छैन । नेता भरत शाहले जितेर गएपछि मधेश क्षेत्रमा कति विकास गर्नुभयो, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ । के पहाडी र के मधेशी सवै नेपाली जनता नै हुन ।
यसमा कुनै विभेद छैन । अतः हामीले स्पष्टसंग भनेका पनि छौं कि क्षेत्र नं. ५ क का जनतामा कुनैपनि प्रकारको मतभेद हुन दिने छैन । विकासका कुरामा पनि समान वितरणको व्यवस्था मिलाउँछौं ।
त्यसकारण मधेश र तराई तथा पहाडी भन्ने कुरा गलत हो । मैलै ५ नं. अखण्ड प्रदेश भनेर नै मधेशवाट पहाडलाई अलग गर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्व गरेकै हो । धेरै बामपन्थी नेताले पहाडलाई तराईवाट अलग गर्नुपर्दछ भनेर मुद्दा उठाएकै हुन तर मैले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर विपक्षीहरुको माग पूरा हुन पाएन । यो त सवैले देखेर जानेकै कुरो हो ।
६) अन्त्यमा यहाँका जनताको के धारणा पाउनु भयो ?
केही मानिसहरुले भोट फरक फरक उम्मेदवारलाई दिन मतदातालाई भ्रममा पारेका छन । यो झुठको खेती गर्ने दुष्प्रयासतर्फ मतदाताहरु सचेत वन्नु जरुरी छ । विगतमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिदिन्छु, घरमै लालपुर्जा दिन्छु भन्नेहरुले जनतावाट पैसा समेत लगेर अहिले जनताको घरदैलोमा फेरी झुटको खेती गर्न आएका छन ।
उनीहरुवाट मतदाता सचेत वन्नु जरुरी छ । सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने भन्दै जनतावाट उठाएको लाखौं रकममा भ्रष्टाचार भएको छ । अव जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ सुकुम्वासीको पुर्जा दिन्छु भन्नेहरु अहिले कता गए ?
त्यसकारण अव जनताले यसपटक मलाई अर्थात रुखमै भोट दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन । जनताको यो अभिमत मेरो चुनावी दौरानमा यही पाएको छु ।
तस्वीरहरु : कपिल ज्ञवाली /नागरिक अावाज ।
क्षेत्र नं.५ रुपन्देही : कांग्रेस उम्मेदवार भरत शाह भन्छन्-‘मेरो क्षेत्रमा कुनै बाम-साम छैनन्’
मेरो विजयको आधार भनेको यहाँका मतदाता नै हो :फकरुद्दिन खाँ
कांग्रेसले बुटवल,भैरहवा र मर्चवारमा भोली बृहत चुनावी सभा गर्दै,केन्द्रिय नेताहरुले सम्बोधन गर्ने